Cameyo - Chamorro - Birmano Traducción y ejemplos
Usted buscó: cameyo (Chamorro - Birmano)
လမ်းပြသောလူကန်းတို့၊ သင်တို့သည် ခြင်တကောင်ကိုမျှ မပါစေခြင်းငှါ ရေကိုစစ်လျက်နှင့် ကုလား အုပ်ကို မျိုကြ၏။
Mas guse malofan un cameyo gui matan un jaguja, qui y gaegüinaja ujalom gui raenon Yuus.
ကုလားအုပ်သည် အပ်နဖားကိုလျှိုလွယ်၏။ ငွေရတတ်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ခဲသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
Sa guseña malofan un cameyo gui matan y jaguja, qui ujalom un rico gui raenon Yuus.
ကုလားအုပ်သည် အပ်နဖားကို လျှိုလွယ်၏။ ငွေရတတ်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ခဲသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
Ya jusangane jamyo talo, na mas guse un cameyo malofan gui matan jaguja, qui un rico ujalom gui raenon Yuus.
တဖန် ငါဆိုသည်ကား၊ ကုလားအုပ်သည် အပ်နဖါးကိုလျှိုလွယ်၏။ ငွေရတတ်သောသူသည် ဘုရား သခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ခဲသည်ဟု တပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏။
Y magaguña si Juan y pilon cameyo yan y godeña cuero na jachaflileg gui senturaña, ya y naña y apacha sija yan y miet jalom tano.
ယောဟန်သည် ကုလားအုပ်အမွေးနှင့်ရက်သော အဝတ်ကိုဝတ်လျက်၊ ခါး၌သားရေခါးပန်းကို စည်း လျက်၊ ကျိုင်းကောင်နှင့် တော၌ဖြစ်သော ပျားရည်ကို စားလျက်နေ၏။
Ya si Juan minagagon pulon cameyo, yan sinturon cuero gui senturaña; ya y naña, apacha yan miet monte.
ယောဟန်သည် ကုလားအုပ်အမွေးနှင့် ရက်သောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်၊ ခါး၌ သားရေခါးပန်းကို စည်း လျက်၊ ကျိုင်းကောင်နှင့် တော၌ဖြစ်သောပျားရည်ကို စားလျက်နေ၏။
cucina d'autore (Italiano>Inglés)who is your childhood hero in hindi films (Inglés>Hindi)aap apni pic bhej sakte ho (Hindi>Inglés)job lavoro (Italiano>Inglés)makulit i (Tagalo>Francés)10 example of tanaga (Inglés>Tagalo)आज मेरा जन्मदिन है (Hindi>Inglés)bürgerlichen (Alemán>Finés)is kius me (Inglés>Español)mai tumhare bina adhura mehsus kar raha hu (Hindi>Inglés)remote desktop (Inglés>Ruso)beati bellicosi (Latín>Italiano)aucuns (Francés>Ruso)i am sixteen years old (Francés>Inglés)ni feng le ma (Chino (Simplificado)>Inglés)sahi bol rha h (Hindi>Inglés)always love your mother cause you never get (Inglés>Hindi)main breakfast nahi karti (Hindi>Inglés)agregaty hydrauliczne (Polaco>Inglés)tidak tersusun (Malayo>Inglés)il potere dell'immortale (Italiano>Latín)apne koi jawab nahi diya (Hindi>Inglés)tenaamstelling (Neerlandés>Alemán)aap apna photo bhej sakte ho (Hindi>Inglés)battuta di gamberi rossi (Italiano>Inglés)